Wasiirro ka tirsan faderaalka oo Cadaado kulamo ku qaatay
Cadaado [RBC Radio] Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Cadaado oo xarun u ah maamulka Ximan iyo Xeeb,waxaana ay halka ka billaabeen kulamo kala duwan oo ay ku qaadanayaan.
Read more about Wasiirro ka tirsan faderaalka oo Cadaado kulamo ku qaatay
Cabdikariim Xuseen Guuleed Oo Olole Doorasho Ka Bilaabay Cadaado
Cabdikariim Xuseen Guuleed, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ayaa si rasmi ah ololahiisa doorasho oga bilaabay magaalada Cadaado, waxayna noqoneysaa markii koowaad oo uu si cad loo shaaciyo musharaxnimada Cabdikariim.
Read more about Cabdikariim Xuseen Guuleed Oo Olole Doorasho Ka Bilaabay Cadaado
Maamulka magaalada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay horumar ka socda magaalada, iyo sidoo kale qorshaha sanadkaan uu maamulka damacsan yahay.
Read more about Dhagayso::Maamulka Degmada Gaalkacyo Oo Ka Warbixiyay Horumaro Ka Socda Magaalada
Maxamad Mursi oo 20 sano lagu xukumay
Madaxwaynihii hore ee Masar Maxamad Muesi ayaa lagu xukumay labaatan sano oo xarig ah
Read more about Maxamad Mursi oo 20 sano lagu xukumay
Nadwadii Bosaso ka socotay oo lasoo gabagabeeyay, bayaanna laga soo saaray(Sawirro)
Read more about Nadwadii Bosaso ka socotay oo lasoo gabagabeeyay, bayaanna laga soo saaray(Sawirro)
Wakhtiga Doorashada Somaliland oo lagu dhawaaqay
Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay in doorashada ay dhici doonto sanadka soo socda
Read more about Wakhtiga Doorashada Somaliland oo lagu dhawaaqay
800 oo qof oo ku dhimatay xeebaha Liibiya
QM ay ayaa sheegtay in ay ka cabsi qabto in sideed boqol oo qof ay dhinteen markii dooni la ciirciiraysay muhaajiriin ay ku dagtay xeebaha Liibiya axaddii.
Read more about 800 oo qof oo ku dhimatay xeebaha Liibiya
Xukunka dacawadda Mursi oo maanta la filaya
Maxkamad ku taalla Masar ayaa lagu wadaa inay go'aankii ugu hoereeyey ka gaarto tiro kiisas ah oo dhan ka ah madaxweynihii hore, Maxamed Mursi, oo milaterigu ay xukunka ka tureen sannadkii 2013.
Read more about Xukunka dacawadda Mursi oo maanta la filaya
Warbaahinta Muqdisho oo ku farxday qarixii Garowe iyo Madaxweyne Xassan oo dhaqaale ku doonaya dhiiga shacabka Puntland.
Warbaahinta Magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweysay, aadna ugu faraxday Weerarkii Argagixisadu ay maanta ka geysteen Magaalada Garowe, Caasimada Puntland.
Idaacadaha iyo Websiteyada Muqdisho ayaa aad u buun-buninaayey mashaqadaas maanta dhacdey, iyagoo wax dareen ah iyo tacsi aan midna u muujin Dadkii ku dhintey iyo kuwii khasaaruhu ka soo gaarey weerarkaas.
Saxaafadahaas ayaa qaarkood waxay u dhaqmayeen sidii ay yihiin Afhayeenada Argagixisada, iyadoo hadalkooda laga dhadhan sanayay iney raali ka yihiin,Lana shaqaystaan Argagixisada.
Read more about Warbaahinta Muqdisho oo ku farxday qarixii Garowe iyo Madaxweyne Xassan oo dhaqaale ku doonaya dhiiga shacabka Puntland.